AFG Caravelle III ကို SE-210 DOWNLOAD FSX & FSX-Steam - Rikoooo
AFG Caravelle III ကို SE-210 FSX & FSX-Steam
downloads ရယူရန္ 12 361
မဟာမိတ် FS အဖွဲ့ (AFG)
အဘို့အတင့်တယ်ခြင်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီ Caravelle III ကို (Sud လေကြောင်းဆိုင်ရာ) အရှေ့တောင်-210 မော်ဒယ် FSX, အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအတွက်ပထမဦးဆုံး။ ပြင်သစ်လေကြောင်း (8), Air ကိုအင်တာမီလန် (1979) Swissair (1968), ပြင်သစ်လေတပ် (1962), အဆိုပါကလပ်ဆွီဒင် Caravelle (1990), ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းအင်တာနေရှင်နယ် (2008), Alitalia (1970), Air ကိုဗီယက်နမ်အပါအဝင် 1960 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူထည့်သွင်း (1966) ။
ထုံးစံအသံထုံးစံ gauge, စာရွက်စာတမ်းများ, စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း, သတင်းအချက်အလက်ကိုးကား, Animation စသည်တို့ကိုလည်းပါဝင်သည်ဒီလေယာဉ်ပျံ FS2004 ဘို့လုပ်ပါတယ်ခံခဲ့ရပေမယ့်နှင့်အတူအပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ် FSX SP2 သို့မဟုတ် Acceleration သို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ (ထဲမှာ DirectX ကို 10 ကို Preview uncheck FSX သော graphical configuration များ) ။ Rikoooo ဖို့ aircraft.cfg panel.cfg အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ် FSX.
အဘယ်သူမျှမကို virtual cockpit, အ add-on သင်က Caravelle တွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားမဟုတ်လျှင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာ simulated နှင့်အပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် 2D panel မှမောင်းထုတ်ရမည်။ .htm c01afv3 ဖိုင်) သို့မဟုတ် Windows Start menu မှကြည့်ပါ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
အဆိုပါ Sud လေကြောင်း Caravelle အရှေ့တောင် 210 1958 အတွက်Aérospatialeဖြစ်လာခဲ့သည်သောပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Sud-လေကြောင်းက 1973 နှင့် 1970 အကြားထုတ်လုပ်တိုတိုနှင့်အလယ်အလတ်-ခရီးရှည်သွားလမ်းကြောင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီးထုတ်လုပ်မှုထဲသို့ကမ္ဘာမှာပထမဦးဆုံးလူထုအခြေပြုဂျက်လေယာဉ်ကအဘို့အမှုအဖြစ်ကြယ်တံခွန်သကဲ့သို့, သို့မဟုတ် subalaires တောငျ့အတွက်အလေယာဉ်ကိုယ်ထည်၏နောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးမော်တာနှင့်မအတောင်ရှိဖို့အချိန်များအတွက်ဆန်းသစ်သောအဝိသေသ, ရှိပါတယ် ဘိုးအင်း 707 ။ ထိုသို့သောဒေါက်ဂလပ်က DC-6 အဖြစ်ပစ္စတင်အင်ဂျင်လေယာဉ်ကိုအစားထိုးဖို့ဒီဇိုင်း, အ Caravelle 80 မှ 130 1 နှင့် 6503ကီလိုမီတာအကြားတစ်ဦးအမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးကျော်ထက်ပိုမို 400 ခရီးသည်ငှါ, ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. ယူနိုင်ပါတယ်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)